诗篇 16 CCB - Nnwom 16 AKCB
1Bɔ me ho ban, me Nyankopɔn,
na wo mu na minya guankɔbea.
2Meka kyerɛɛ Awurade se,
minni ade pa biara ka wo ho.”
3Ahotefo a wɔwɔ asase no so de,
wɔne anuonyamfo a
mʼanigye wɔ wɔn mu.
4Wɔn a wodi anyame afoforo akyi no,
wɔn awerɛhow bɛdɔɔso.
Merengu mogya nsa mma saa anyame no
na meremfa mʼano mmɔ wɔn din.
woama me kyɛfa anya bammɔ.
6Mʼahye akɔdeda mmeae a eye ama me;
ampa ara mewɔ agyapade a ho yɛ anigye.
7Mɛkamfo Awurade a otu me fo;
na anadwo mpo, me koma kyerɛkyerɛ me.
8Mihu Awurade wɔ mʼani so daa nyinaa.
Esiane sɛ ɔwɔ me nsa nifa nti, merenhinhim da.
9Ɛno nti, me kra ani gye, na mede me tɛkrɛma di ahurusi;
me nipadua nso bɛhome asomdwoe mu,
10efisɛ, worennyaw me awufo mu.
Na woremma wo Kronkronni no mporɔw.
11Woakyerɛ me nkwagye kwan,
na anigye a ɛrensa da wɔ wo nifa so.
AKCB : Nnwom 16